mai 2021 - FJKM Amparibe Famonjena
Publié le 15 mai 2021 26 mai 2021
Alahady mialoha ny Pentekosta
“Mampiorina ny Mino ny Tenin’Andriamanitra ”
Mampiorina ny mino ny herin’ny Fanahy masina. Mbola mibanjina izany lohahevitra izany isika amin’ity alahady 16 mey 2021 ity.
Ny Mpitandrina RAKOTOMALALA Fy no nitarika ny fotoana. Ireo Diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Fifandraisana ANDRIANASY Fanja sy ANDRIAMAMPIANINA Naivo no nanao ny vavaka sy namaky ny perikopa anio. Ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra kosa no nitondra ny hafatra tamin’izany.
Ny Salamo 134 : 1 – 3 no novakina niderana an’Andriamanitra. Ny FF 7 : 1, 2 « Tsy hainay ny hangina » no notanterahina taorian’izany. Nanao ny vavaka fisaorana sy fiderana ny mpitarika avy eo.
Nanambara ny sitrapon’Andriamanitra izy, manao hoe : « Mifampanompoa amin’ny fitiavana …Tiava ny namanao tahaka ny tenanao … ».
Rehefa nahatsapa fa tsy nahatanteraka ny sitrapony isika dia nanao ny vavaka fifonana ny Mpitandrina.
Natao ny hira Ffpm 417 : 3 « Nitambesaran’ny ota natao … » ho fiaiken-keloka.
Nambaran’ny mpitarika teo am-pitsanganana ny famelan-keloka, ary novalina tamin’ny hoe : « Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy hisain’ i Jehovah heloka ka tsy misy fitaka ny fanahiny ».
Rehefa izany dia natao ny hira Ffpm 480 : 1 « Mamin’ny foko ry Jesoa o ».
Nanavao ny fanoloran-tena ny Fiangonana ary nanambara ny finoana indray ka nanao ny fanekem-pinoana laharana voalohany.
Nanentana tamin’ny rakitra ny Mpitandrina mba hanavana izany isan-tokantrano ary hanatitra izany rehefa tonga ny fotoana mahamety azy.
Soratra Masina sy vakiteny
Natao ny hira FF 6 : 1, ho fiomanana amin’ny vavaka sy vakiteny ary hitondrana ny hafatra.
Natao ny vavaka ary novakina ny perikopa anio. Izany dia hita tao amin’ny Nehemia 9 : 20-25 ; Matio 12 : 1-21 ; I Korintiana 2 : 1-5.
Mialoha ny hafatra dia natao ny hira Ffpm 190 : 1, 2.
Ny perikopa rehetra anio no nitondran’ny Mpitandrina ny hafatra. Andriamanitra dia nanolotra ny Fanahiny ho an’ny olony sy ho an’ny mpanompony. Ary io Fanahy Masina io dia :
Mampianatra ny olona ho tsara,
Maniraka ny mpanompony hiasa,
Mampiombona ny mpino.
*Mampianatra ny olona ho tsara
Bokin’i Nehemia 9 : 20b « Ary ny Fanahinao tsara dia nomenao … ». Izany no nentina nanazavana izany. Tsara ny Fanahin’Andriamanitra. Nanamarika dieny am-boalohany ny mpitarika fa rehefa misy ny tsara, dia misy koa ny ratsy.
Mampianatra ny olona hanana toe-panahy sy toe-piainana tsara ny Fanahy. Namerina ny tantaran’ny zanak’Israely ny mpitarika eto, ny nitantanan’i Jehovah ny lalan’izy ireo.
Efa nisy fotoana nimenomenona ny zanak’Israely noho ny fiainany, nefa dia nasehon’Andriamanitra fa tsy notantanan’Andriamanitra sy nampianariny mba hanao zavatra tsara hatrany, mba hanaiky Azy Andriamanitra hatrany.
Ny Fanahin’Andriamanitra dia mihevitra ny olona manontolo. Andriamanitra dia manome izay mety sy izay sahaza ny olona, mba tsy hahavery hevitra ny olony izay matetika be fanahiana. Ny olona kosa, ho tambin’izany, dia tokony hitodika sy hihevitra an’Andriamanitra hatrany amin’izay ataony. Tokony hanao zava-dehibe ny fifandraisana Aminy.
Ny Fanahin’Andriamanitra dia loharanon’ny fampianarana rehetra ao anatintsika.
Maniry hitombo ve isika hahalala an’Andriamanitra, maniry hahay ny Tenin’Andriamanitra, maniry hivoatra amin’ny fiainana, maniry hankato ve isika ? Mila ny Fanahy Masina isika raha te hahatratra izany.
Tokony ho ny herin’ny Fanahy Masina no rentsika ao anatintsika, miteny amintsika amin’izay rehetra ataontsika fa tsy ny herin’olombelona, na ny haino aman-jery, na zavatra hafa.
*Fanahy masina maniraka ny mpanompony hiasa
Matio 12 : 18. Nofidin’Andriamanitra izay olona hanompo Azy. Izay rehetra milaza fa mpanompon’Andriamanitra ve nefa dia tena mpanompo ? Izay te hitondra izany dia tsy maintsy manahaka an’i Jesoa Kristy.
Ny mpanompon’Andriamanitra dia akaiky an’Andriamanitra : nofidiny, malalany, hametrahan’ny Tompo ny Fanahiny. Ireo no mahatonga ny mpanompon’Andriamanitra.
Io mpanompo io dia tokony manatanteraka iraka manokana ho an’ny Tompo. Izany dia ny hitorina ny rariny amin’ny jentilisa mba hitarihana azy. Manana anjara amin’izany isika raha tena mpanompony.
Ny rariny dia ny fanarahana ny sitrapony, dia ny fandraisana ny famonjena. Ny tsy rariny dia ny fandavana ny famonjena eo anatrehany.
Atoron’Andriamanitra ny lalam-pamonjena satria tian’Andriamanitra hovonjena ny jentilisa. Manome ny Fanahy Masina ho an’ny olona iharan’ny tsy rariny koa Andriamanitra, ka manampy azy mba hiarina. Andriamanitra dia te hanala ny aizim-pahotana manerana izao tontolo izao ary fifaliana lehibe Aminy ny fahitana olona iray, izay mibebaka ka miverina Aminy.
Ny Fiangonana dia manana anjara amin’izany asa izany koa, hoy ny mpitarika, ka na dia tsy afaka mivoaka lavitra aza isika, dia tokony manao ny asa ao an-tokantrano sy eny amin’ny fiarahamonina. Tokony hitory ny fahamarinana isika ary hitondra izany amin’ny olona.
Ny rariny amin’Andriamanitra dia ny hananantsika fitiavana satria ny didy lehibe dia ny hitiavana an’i Jehovah amin’ny fo rehetra, hitiavana ny hafa tahaka ny tenantsika.
*Fanahy mampiombona ny mpino
I Kor. 12 : 13 no nangalana ny hafatra. Eto no ahitan’ ny fiombonan’ny mpino rehetra. Jesoa no banjinintsika tsirairay. Ny hoe « nampisotroina » eto dia hoe feno tanteraka ny Fanahy Masina isika.
Izany dia midika fiombonan’ny mpino izay samy mibanjina an’i Jesoa Kristy.
Ny fiainana rehefa ao amin’ny Fiangonana dia fianakaviana iray. Tsy ny tena no zava-dehibe fa ilay fiombonana. MIfameno ny olona rehetra manao ny asa fanompoana ary Kristy no lohany ho antsika.
Miala amin’ny fototra isika raha tsy mifanaraka eo anivon’ny Fiangonana. Eo amin’ny fiarahamonina dia misy ny faly amin’ny fahavoazan’ny sasany. Tsy tokony ho izany ny eto anivon’ny Fiangonana fa miara-paly na miara-ory rehefa misy ny manjo. Tena iray ao amin’i Kristy isika. Raha misy manana talenta, dia tokony manana fifaliana isika satria mifameno amin’ny izay mety ho talenta efa nanananao izany. Mila mametra-panontaniana isika hoe niala tamin’izany ve isika ?
Naka ohatra ny amin’ny fanomanana ny fotoam-pivavahana toy izao moa ny mpitarika hoe, misy ny mpitoriteny, mpamaky teny, manao sono, mpihira, mpaka sary. Noho ireo rehetra ireo dia mahavita zavatra tsara isika satria mifameno.
Tokony handeha amin’ny lojikan’ny Fanahy Masina isika satria tsy misy fetra izany. Hankatoavy ny fanomezan’Andriamanitra ny herin’ny Fanahy Masina ho antsika, fa izany no hampiorina antsika, noho ny herin’ny Fanahy masina, mpampianatra ambony indrindra. Efao ny adidy izay maniraka antsika mba hiasa ary io Fanahy Masina io dia mampiombona ny mino.
Nanao sy nampanao vavaka mangina ny mpitarika taorian’izany ary notohizana tamin’ny vavaka fangatahana.
Natao ny hira Ffpm 488 : 1, nambara ny tondrozotra ary natolotry ny Mpitandrina ny tsodrano. Ny hira Ffpm 513 : 1 no namaranana ny fotoana.
Mpitendry orga: IRIMANANA Eninkaja
Publié le 2 mai 2021 9 mai 2021